Igugu elifihliweyo! Indawo entle yokusebenza okanye ukudlala
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguMartha
Ibekwe kumbindi wekhaya ENTSHA ephathwayo. I-Master bdrm inebhedi yenkosi ENTSHA YESIKO kunye nebhafu ye-en suite. I-bdrm yesibini yindlovukazi enebhafu epheleleyo. Ikhitshi elikhulu, igumbi lokutyela kunye negumbi lokuhlala libonelela nge-hangout enkulu. Indawo yokusebenzela enikezelweyo. I-Intanethi kunye nee-TV ezi-2 ezihlakaniphile. Ukufikelela kwi-PTC's 90+ yeemayile zeenqwelo zegalufa ngokuqeshwa kwenqwelwana yegalufa! Ukuhamba umgama ukuya kwiibhari, iindawo zokutyela, iivenkile ezithengisa ukutya. Emithi, ipaki ezolileyo, enobuhlobo nosapho. Indawo egqibeleleyo yestudio kunye nokuhlala emsebenzini. Imizuzu engama-30 ukuya kwisikhululo seenqwelomoya saseAtlanta.
Ikhaya elitsha elihambahambayo libonelela ngokucocekileyo, indawo ebanzi, indawo ekhululekileyo kunye nekhuselekileyo. Indawo entle yabahlobo kunye nosapho. Ibhedi yenkosi eqhelekileyo, ibhedi ekhululekileyo kakumkanikazi kunye negumbi lokuhlambela eli-2 eligcweleyo. Awuyi kufumana ubumfihlo obungakumbi kunale ndawo kwindawo ye-PTC enokufikelela kwiindlela zeenqwelo zegalufa, iikhosi zegalufa, iipaki, iindawo zokutyela kunye neebhari.
Ukuhamba umgama ukuya ePublix kunye neevenkile ezithengisa ukutya, iivenkile zokutyela ezinkulu, imivalo kunye neendawo zokuzivocavoca. Ukukhwela ibhayisekile ngokukhawuleza okanye kwinqwelo yegalufa ukuya emachibini, kwiipaki, ezivenkileni nakwisixeko sonke. Ubuhlobo, ukuzola, iinkuni, ubumelwane. Besinenye indlu ehambayo kwipaki enye iminyaka emininzi. Siyabazi abamelwane kwaye nabo bayasazi. Luluntu olukhuselekileyo, olunobuhlobo nosapho. Ikhaya elihambahambayo lineminyaka emi-4 ubudala. Abahlobo bethu nosapho bahlala apha xa beze kusityelela ngeeholide nangezihlandlo ezikhethekileyo. Yindawo entle kwaye ngenqwelo yegalufa akufuneki nokuba uqhube naphi na! Hamba ngenqanawa uye eLake Peachtree kwaye ubukele ukutshona kwelanga ngaphambi kokuya kwisidlo sangokuhlwa. Jonga imarike yomfama okanye enye yeeMarike zenyanga zasebusuku, bona umculo ophilayo eKutya Apha. Uya kujikelezwa zizinto ozenzayo. Ukurenta inqwelo yegalufa ekhethiweyo kumnandi kusapho lonke. Uyakufuna ukufumana olu phawu lukhethekileyo lwePTC.
Hi! We're a local family and we are looking forward to hosting your Peachtree City, GA getaway!
Ndiyakushiya ngokubanzi uyonwabele imfihlo yakho kodwa ukuba ufuna into ndiyafumaneka.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Peachtree City